အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page 10 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသားတွေ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ဘာကြောင့် မထည့်သင့်သလဲ?
19.9.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
လက်ကိုင်ဖုန်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုတွေကို ကြောက်ကြပေမယ့် အများစုက ဖုန်းတွေကို ဂျင်းဘောင်းဘီတွေထဲမှာ ထည့်ကြတုန်းပါပဲ။ ဒါက သ...
14.9.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေထဲမှာ ကလေးရနိုင်ချေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်လည်း အပါအ၀င်ဖြ...
12.9.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆေးလိပ်သောက်သူတိုင်းအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်
5.9.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးနည်းစေဖို့ အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
1. ဗီတာမင် C ပါသော ...
ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အစားအစာများ
29.8.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ခြင်းသည် နှလုံးရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်
24.8.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားများမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသားအင်္ဂါဆီသို့ သွေးထောက်ပံ့မှု မရရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အမျိုးသားအင်္ဂါ...
ပျားရည်သည် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချပေးနိုင်
22.8.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဆိုတဲ့ သတိပေးဆောင်ပုဒ်ကို လူတိုင်းနီးပါးသိကြပေမယ့်လည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ...
6.8.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဖခင်တို့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ရင်သွေးငယ်များအတွက် မိမိအသက်ကိုပင် ပေးအပ်လိုသည့်မေတ္တာများ ထားရှိတတ်သော်လည်း ရံဖန်ရံခါမိမိတို့ကလေးငယ်များနှင့်အနေ...